बदमासमा सोनिका र दीपेन्द्रको रोमान्स - RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal
Home कला बदमासमा सोनिका र दीपेन्द्रको रोमान्स
काठमाडौं । लकडाउन खुकुलो भएसँगै दैनिकजसो म्युजिक भिडियो रिलिज कार्यक्रम काठमाडौंमा आयोजना गर्न थालिएको छ । यसैक्रममा गायक चिरञ्जीवी भण्डारीले आफ्नो नयाँ गीत ‘बदमास…’ को भिडियो काठमाडौंमा एक औपचारिक कार्यक्रमबीच सार्वजनिक गरेका छन् । आफ्ना संगीत गुरुराम सिटौला सभापति बनाएर अग्रज गीतकार डा. कृष्णहरि बरालको प्रमुख आतिथ्यतामा उनले आफ्नो गीत सार्वजनिक गरेका हुन् ।
अहिलेको पुस्तालाई मन पर्ने नृत्यप्रधान गीत गायक भण्डारीले ल्याएको डा. बरालले कार्यक्रममा बताए । आफ्नो चेला गायनमा स्थापित हुँदै गएकोमा यो गीतको प्रशंसा गर्दै राम सिटौलले कार्यक्रममा खुसी व्यक्त गरे ।
यो गीतको भिडियोमा दीपेन्द्र सोनाम र सोनिका रोकायाको अभिनय छ । यी दुईको रोमान्समा भिडियो केन्द्रित छ । चिरञ्जीवी र दिलिप पनि भिडियोमा प्रस्तुत भएका छन् । आफूले पुराना मोडलहरूलाई भिडियोमा खेलाउँदा एकपटक पनि भिडियोलाई सामाजिक सञ्जालमा सेयर नगरिदिएको हुँदा नयाँसँग काम गरेको चिरञ्जिबीले कार्यक्रममा बताए । यो भिडियो ओएसआर डिजिटलको च्यानलबाट सार्वजनिक गरिएको पनि उनले बताए ।
बदमास गीतलाई भीम विसीले संगीत भरेका छन्, जसमा विक्रम सुन्दासको शब्द, पुष्कर सुनुवारको संगीत संयोजन रहेको छ । यो गीतको भिडियोलाई दिलिप अखेडाले निर्देशन गरेका हुन् । भिडियोमा उत्सव दाहालको छायांकन, विष्णु खड्काको सम्पादन रहेको छ ।
मुम्बई । अभिनेत्री कंगना रनौतको घरलाई लक्षित गरेर गोली प्रहार गरिएको छ । शुक्रबार राति उनको घरअगाडि दुई गोली प्रहार गरेपछि घरमा सुरक्षाकर्मी तैनाथ...
भूत अवतारमा अभिनेत्री केकीको बदला
काठमाडौं । लकडाउनका कारण विगत चार महिनादेखि घरमा बसेकी अभिनेत्री केही अधिकारी यतिबेला एउटा भिडियोमार्फत भूत अवतारमा प्रस्तुत भएकी छन् । अभिनेत्री केकी ‘बदला...